> Resource> iPhone> iPhone Obere Ụbọchị mwepụta na Ahịa: News na asịrị
Ga Apple hapụ ihe iPhone Obere?
The iPhone Obere e nụrụ kepu kepu na ruo ọtụtụ ọnwa. Ná mmalite nke 2013, Analyst buru amụma na Apple ga hapụ a ala-ọnụ iPhone, ọhụrụ iPhone Obere, a na mbubreyo n'oge okpomọkụ ma ọ bụ n'oge ọdịda. O doro anya na, Apple ka kpughere ihe iPhone 5S na iPhone 5C na ụwa, kama a na-akpọ iPhone Obere. Bụ na sị Apple agaghị hapụ ihe iPhone Obere? E nwere nza nke nwere obi abụọ ụda.
Ruru akwa price nke iPhone, ọtụtụ ọrụ ka ike ghara imeli ya, n'agbanyeghị na ha na-na na ezigbo Apple Fans. Ha ga-kama họrọ otu agadi nlereanya nke iPhone ma ọ bụ ndị ọzọ yiri smartphones, kama nke na-na ọhụrụ otu. Ọ bụrụ na Apple chọrọ imeri Samsung na-emeri ihe karịrị otu ibu isi nke na-eji ọkụ, a ala-ọgwụgwụ ma dị ọnụ ala ngwaọrụ ("iPhone Obere") dị mkpa. Ọ ga-ụgbọala incremental revenue, oké uru, ha na nke a ka e nkwenye site Katy Huberty, onye na nyocha na ichekwa ego na bank ike. Mgbe ya nzukọ na Apple Chief Financial Officer Peter Oppenheimer, O kwuru na a ala dị ọnụ iPhone-eme ka uche n'ihi ọtụtụ ihe:
1. "iPad Obere na-ịgbasa Apple si ahịa isi na 50 [percent] nke ịzụrụ na China / Brazil na-anọchite anya ọhụrụ ahịa ka ilekota."
2. "Chinese ọkụ eletrik na-egosi a ọchịchọ ịzụta ọhụrụ version nke iPhone (kama ego okenye ọgbọ)."
3. "iPhone 4 ina idem ka isi na December nkeji iri na ise."
Gịnị ga-iPhone Obere dị?
N'otu isi ihe si ya niile asịrị bụ na iPhone Obere ga-a ala-ọgwụgwụ ngwaọrụ. Dị ka a nta, dị ọnụ ala karịa variant nke iPhone, ọ ga-enwe a 3.5-anụ ọhịa ma ọ bụ 4-anụ ọhịa ihuenyo, a ubé thicker plastic ahu, ihe Apple A5 processor, otu 5-megapixel igwefoto ka iPhone 4, na a ga na-abata na ise agba. Anọ nke agba ga na-acha ọcha, nwa, pink, na-acha anụnụ anụnụ.
E wezụga na, na iPhone Obere ga-abịa na nnọọ nta integrated ebe nchekwa, ma ezuru ibudata na-agba ọsọ ngwa. "Ọ ga-ezuru naanị ebe nchekwa na echekwa media streamed si n'ígwé ojii ahụ," na-ede òtù nzuzo nke Mac. "The [ngwaọrụ] ga-sere nile ọ bụ ọdịnaya site MobileMe. Mgbe ndị ọrụ ịzụta a fim ma ọ bụ TV show on iTunes, ọ bụ dị ka enuba ha iPhone ma ọ bụ iPad."
Ọzọ, ka ego ụfọdụ "leaked" iPhone Obere foto:
Otú ihe ga-Apple ego ọhụrụ iPhone Obere?
Dị ka price, nke kasị ala otu e kwuru na $ 99. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, ọ ga-abụ oké ozi ọma n'ihi na ọtụtụ n'ime Apple funs ndị nwere ike imeli ihe iPhone n'ihu.
Ọtụtụ n'ime nnyocha na-eche na ọ ga-iputa na a price nke $ 350 ka $ 400, na-enweghị nkwekọrịta. Nke ahụ bụ ihe dị ka ọkara ihe dị ka iPhone 5. Ụfọdụ ndị ọzọ mkpọ iPhone Obere price na n'etiti $ 200 na $ 250. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iPhone Obere dị mma, na ego bụ n'ezie ala karịa ndị ọzọ iPhones, Apple ga-adọta ìgwè ọzọ nke ndị mmadụ. Ka-anya na ya.